Myanmar Entrepreneur Group: ဒေါက်တာနုနုယဉ်ပြောပြတဲ့ Entrepreneurship (၁)
ဒေါက်တာနုနုယဉ်ပြောပြတဲ့ Entrepreneurship (၁)
ကိုစိုးထက်ကြီးက ကျနော့်ကို ဒီဘလော့ဂ်မှာ contribute လုပ်ဖို့ email ကနေ invite လုပ်လာတာနဲ့ စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ဖြစ်တော့ ဘလော့ဂ်နာမည်က Myanmar Entrepreneurs ဆိုပဲဗျ။ ဒါနဲ့ ကျနော် တော်တော် စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ကျနော်ဆိုတဲ့လူကလည်း Entrepreneur သိပ်ဖြစ်ချင်တဲ့သူကိုး။ အခြေအနေအရသာ မလုပ်နိုင်သေးတာလေ။ ဒါနဲ့ ကျနော် ဘာအကြောင်းအရာ ရေးပေးရမလဲပေါ့။ စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ ခေါင်းထဲတန်းပေါ်လာတာက ၂၀၀၆ ခုနှစ်တုန်းက Myanmar Info-Tech မှာ လုပ်သွားတဲ့ Seminar တစ်ခုမှာ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနက ပါမောက္ခ/ဌာနမှူး ဆရာမကြီး ဒေါက်တာနုနုယဉ် ပြောပြသွားတဲ့ Entrepreneurship & Small Business Management ပို့ချချက် ကလေးပါပဲ။ ကဲ… ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။
Entrepreneur ဆိုတာ ဘာလဲ?
မြန်မာလိုတော့ အမျိုးမျိုး ဘာသာပြန်ကြပါတယ်။ 'စွန့်ထွင်ဦးစီး'၊ 'စွန့်ဦးတီထွင်' စသဖြင့်ပေါ့။ ဆိုလိုတာက စွန့်စားကြတယ်၊ ဦးစီးကြတယ်၊ တီထွင်ကြတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့ထိတော့ တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဝေါဟာရ မရှိသေးပါဘူး။ ပထမ ဖွင့်ဆိုချက်အရ Entrepreneur ဆိုတာ သူ့ရဲ့အမူအကျင့်ကိုက အမြဲတမ်း အသစ်အဆန်းကို တီထွင်မယ်၊ အတွေးအခေါ်ကအစ creative idea ရှိမယ်၊ innovate လုပ်မယ်၊ လူတွေ အတွက် အင်မတန်မှ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ပေးလာတဲ့ အခွင့်အလမ်းအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ရအောင် အကောင်အထည်ဖော်သွားမည့်သူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယ ဖွင့်ဆိုချက်တစ်မျိုးကတော့ Entrepreneur ဟာ ဘယ်သူ့ကို ရွေးရမလဲဆိုတာ သိတယ်။ သူများနဲ့ မတူပါဘူး။ အမျိုးတော်လို့ ခေါ်ခန့်လိုက်တတ်တဲ့သူမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လိုလူမျိုးကို ဘယ်နေရာအတွက် ခန့်မလဲ၊ ဘာအလုပ်ကို ခိုင်းမလဲ၊ ဘယ်သူနဲ့ ပေါင်းမလဲ စသဖြင့် ရွေးတတ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အဖွဲ့အစည်းလေးဖြစ်အောင် သူက ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နှောင့်နှေးတာမျိုး မရှိဘူး။ တစ်ခုခုလုပ်ရင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်တတ်ပြီး အရာရာကို ဖြစ်အောင် အကောင်အထည်ဖော်တတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ဖွင့်ဆိုချက်တစ်မျိုးကတော့ Talent (ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်/ပါရမီ)၊ Temperament (ပင်ကိုယ် စိတ်နေသဘောထား) နဲ့ Technique (နည်းပညာတတ်ကျွမ်းမှု) ဆိုတဲ့ T သုံးလုံးကို မှန်မှန်ကန်ကန် အချိုးကျ ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊ သူများထက်ကို ထူးခြားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်နိုင်တဲ့သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(ကဲ… ဒီဖွင့်ဆိုချက်တွေကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ဟာ ဒီလိုလူစားမျိုးထဲမှာ ပါသလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကိုယ့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ဒီလိုလူမျိုး ရှိနေသလား တွေးကြည့်ပါ။ ကိုယ့်မှာ entrepreneur အရည်အချင်းမျိုး မရှိလို့ စိတ်ညစ်မသွားပါနဲ့။ ကျနော် ဆက်ရေးမည့်ဟာလေးတွေ ပြီးအောင်တော့ ဖတ်သွားပါဦးဗျာ။ ဟဲ… ဟဲ…။)
ခုခေတ်ကမ္ဘာမှာ globalization ဖြစ်လာပြီး အထူးသဖြင့် တိုးတက်ပြီးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ entrepreneur ဆိုတဲ့ စကားကို အမြဲပြောနေကြတော့ entrepreneur က အရေးပါလာပြီးပေါ့။ ဒီဆယ်စုနှစ်ရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုအတွက် အရေးအကြီးဆုံးအချက်က ဒီ entrepreneur spirit ပေါက်ဖွားလာမှုပါပဲ။ တကယ်လို့သာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေ အားလုံးဟာ သာမန်လူတွေမဟုတ်ဘဲ entrepreneur တွေဖြစ်မယ်၊ စိတ်ဓါတ် ကိုယ်က entrepreneur spirit ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေဟာ တိုးတက်လာဖို့ အလားအလာ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေကို ဒီစိတ်ဓါတ် သွင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ (ကဲ.. ကျနော် မပြောလား။ ခင်ဗျားမှာ ဒီအရည်အချင်းမရှိရင် မွေးယူလို့ ရပါတယ်ဗျ။ ဆက်ဖတ်.. ဆက်ဖတ်..။)
Entrepreneur ဆိုတာ ဘယ်လိုလူတွေလဲ?
Entrepreneur ဆိုတဲ့လူတွေကို သုတေသနလုပ်မယ်ဆိုရင် ကဏ္ဍသုံးမျိုး ခွဲခြားလေ့လာလို့ ရပါတယ်။ အဲဒါတွေက သူတို့ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲ (Personal Factors)၊ သူတို့ ဘယ်ကလာကြသလဲ၊ ဘယ်လို အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပေါက်ဖွားလာကြတာလဲ (Environmental Factors) နဲ့ သူတို့ ဘာတွေလုပ်ကြသလဲ (Action Factors) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Personal Factor တွေမှာ သဟဇာတဖြစ်မှု (Adaptability)၊ ပြိုင်ဆိုင်မှု (Competitiveness)၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု (Confidence)၊ ရိုးသားမှု (Honesty)၊ မဆုတ်မနစ်စိတ်ရှိမှု (Perseverance)၊ ဆွဲဆောင်စည်းရုံးမှု (Persuasiveness)၊ စွန့်စားမှု (Risk Taking) နဲ့ မျှော်မှန်းချက်မြင့်မားမှု (Vision) ဆိုတဲ့ အချက် (၈) ချက် ပါဝင် ပါတယ်။ Environmental Factor တွေမှာ မိသားစု ကျောထောက်နောက်ခံ (Family background)၊ ပညာ အရည်အချင်းနှင့် အသက်အရွယ် (Education & Age) နဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (Work experience) ဆိုပြီး (၃) ချက် ပါဝင်ပါတယ်။ Action Factor တွေကိုတော့ (၁၀) မျိုးခွဲထားပါတယ်။
(နောက်ထပ် post တွေမှာ ဒီအချက်တွေအကြောင်းကို ပုံလေးတွေ diagram လေးတွေနဲ့ အသေးစိတ် ရေးပြပါမယ်။ post တစ်ခုထဲမှာ အကြောင်းအရာအများကြီး တင်ပေးလိုက်ရင် ဖတ်ရတဲ့သူ ငြီးငွေ့ သွားနိုင်လို့ နည်းနည်းချင်းစီ တင်မယ်ဗျာ။ နော့။ ကိုရီးယားကားတွေလိုပေါ့။ အခန်းဆက်နဲ့ရေးမယ်။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ဖတ်မယ်မဟုတ်လား။)
Posted by : Unknown Posted @ 10:19 AM
ကိုစွမ်း July 29, 2008 at 11:15 AM
အရမ်း ဗဟုသုတ ရစေပါတယ် ခင်ဗျာ။ :)
စိုးထက် - Soe Htet ! July 29, 2008 at 11:17 AM
ကို စတန်လေ ကို ဒါတွေ ကြောင့် အားကိုး နေရတာ ဗျ ... ဟိ ... ဆက်လုပ် ... :)
zeRoTraSh July 29, 2008 at 11:18 AM
ကောင်းတယ် ဆက်ရေးပါ စောင့်ဖတ်ပါ့မယ်
ဟီး ကိုယ့်အကြောင်းရေးတယ်ပဲ သဘောထားတယ် :D
My Wonderful Moral Thoughts July 30, 2008 at 10:59 PM
I never realized Entrepreneur in Burmese translation. Now that i know by your post which i got knowledges. Cheers for that.
Great post for everyone who interested in it.
Of course, I will carry on reading if you continue to posts it. No Doubts.
Well Done. Good Job Satanlay. :))
^A^ August 5, 2008 at 9:28 PM
Good article for Good entrepreneurship!
Entrepreneur blogspot မှာ နောက်ကျပြီးဖက်ရမှာ နှမျောလွန်းလို့ ပါရှင်-
Risk Taking နဲ့ ကျွန်တော်
Think Global Work Local :D
Old Skool and New Skool